Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo guddi magacaabay . | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo guddi magacaabay .
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo guddi magacaabay .
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Fillish) ayaa magacaabay Guddiga diyaarinta iyo ka soo tala bixinta qorshaha lagu furayo waddooyinka xiran ee magaalada Muqdisho.
Guddigan oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxaa Guddoomiye looga dhigay Guddoomiye ku-xigeenka Amniga Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax, waxaa xubin ka ah Taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugida Gobolka Banaadir afar xubnood oo kale.
Wareegtada ka soo baxday xafiiska Guddoomiyaha Gobolka ayaa lagu caddeeyay inuu la tashaday Hey’addaha amniga, isla markaana uu tixgeliyay baahida loo qabo isu socodka shacabka iyo Gaadiidka magaalada Muqdisho ayna lagama maarmaan tahay in la sameeyo qorshaha lagu furayo waddooyinka muhiimka ah ee xiran ee magaalada.
Previous articleHorjooge ka tirsanaa Shabaab oo isi soo dhiibay
Next articleGuddoomiyaha Maxkamadda Sare JFS Dr Baashe Yuusuf Axmed oo soo xiray imtixaanka kaaliyeyaasha.